Moto G6 iyo G6 Ciyaar: Tilmaamaha, qiimaha iyo naqshada ayaa xaday | Androidsis
Tani waxay u muuqataa inay tahay wiiggii daadinta Motorola. Sababtoo ah dhawaanahan waxaan ka hadalnay taleefanka cusub ee sumadda ee qayb ka noqon doona qaybta Moto Z. Haddaba, laba moodel oo cusub ayaa la soo saaray, kuwaas oo faahfaahintoodii hore loo ogaa. Waxay ku saabsan tahay Moto G6 iyo G6 Play. Laba ka mid ah aaladaha cusub ee lagu dari doono buug-yaraha astaanta si dhakhso leh.
Labadan taleefan ayaa horay looga hadlay. Hadda, waxaan horeyba u haysannay sawirradii ugu horreeyay iyo qeexitaannada labada. Markaa Moto G6 iyo G6 Play ayaa horeyba nooga hayey wax yar oo sir ah. Maxaan ka filan karnaa taleefannadan?
Qeybtan waxaa la filayay in lagu soo bandhigo MWC 2018. Laakiin waxay umuuqataa in Motorola ay dooratay inay daahiso bandhigan, si looga hortago taleefanada inay noqdaan kuwa aan laga warqabin. Hal bil kadib dhacdadii taleefanka ee Barcelona waxaan horey u ogaanay macluumaadka ugu horeeya ee ku saabsan labada nooc.
1 Sooc Moto G6
2 Tilmaamaha Moto G6 Ciyaar
Sooc Moto G6
Ugu horreyntii waxaan helnaa qaabkan, Moto G6. Waa taleefan sharad ku gala shaashad aan loox lahayn, suuqana aad ugu moodo. Waxay leedahay shaashad 5,7-inji ah oo leh xal buuxa HD + iyo saamiga 18: 9. Gudaha taleefanka a Processor Snapdragon 450, oo ay la socdaan 3 ama 4 GB oo RAM ah. Marka lagu daro 32 ama 64 GB oo ah kaydinta gudaha ah.
Moto G6-kan ayaa leh kamarad labajibbaaran xaga dambe. Waa kamarad 12 + 5 MP ah. Intii ay qayb ka ahayd hore kamarad 16 MP ah ayaa ina sugaysa. Waxaan horeyba u ogaan karnaa inay yeelan doonto Android Oreo oo ah nidaam hawlgal ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay yeelan doontaa a 3.000 mAh baytariga. Marka waa inay siisaa madax-bannaani ku filan dadka isticmaala.
Qiimaha, Waxaa la shaaciyay in Moto G6 la filayo in lagu qiimeeyo ilaa 210 euro. Marka waxay noqon doontaa qiimo la mid ah kii ka horreeyay. In kasta oo ay macquul tahay in qiimaha ugu dambeeya xoogaa qaali yahay. Laakiin wali lama xaqiijin.
Tilmaamaha Moto G6 Ciyaar
Meesha labaad waxaan ka helnaa qaabkan, oo aad ugu eg kan koowaad. Waxay leedahay shaashad 5,7-inji ah oo HD + xallin ah. Sidoo kale waa shaashad la mid ah ta moodii hore, sidaas darteed waxay ku sharadaysaa looxyo aad u dhuuban. Gudaha waxaan ka helnaa Snapdragon 430. Ku saabsan RAM iyo keydinta gudaha waxba lama soo bandhigin. Laakiin waxaa laga filayaa inay la mid noqdaan ama la mid yihiin taleefankii hore.
Sida qaybta sawirada, Moto G6 Play wuxuu ku leeyahay hal kamarad dhabarka. Waa a 13 MP kamarad. Waxba lagama soo saarin kamaradda hore ee qalabka. Sida walaalkiis ka weyn, wuu qaadi doonaa Android Oreo sida nidaamka hawlgalka caadiga ah. Sidoo kale, kiiskan waxaad lahaan doontaa bateri weyn. Tan iyo markii uu baytarigu wuxuu noqon doonaa 4.000 Mah. Wax shaki la'aan ah wuxuu ku siinayaa madax-bannaanid badan.
Qiimaha Moto G6 Play wuxuu noqon doonaa qiyaastii 165 euro, Qiimaha ugu xiisaha badan iyadoo la tixgelinayo qeexitaanka qalabka. In kasta oo wax waliba ay umuuqdaan inay muujinayaan in suuqyada Yurub qiimaheedu xoogaa ka sarrayn doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Motorola Moto G6 iyo G6 Play ayaa si buuxda u soo dusay
Eder… like… »bilaa muraayadaha»… waxaan aragnaa isla sawiro, aniga iyo adiga ma aragno? 😉
Ku jawaab Luukos